The Shirkadda Isboortiga Dadweynaha waa shirkad tayo leh, oo ah shirkad tayo leh oo udub-dhexaad ah oo loogu talagalay inay ku faraxsan tahay iyo dhagaystayaasha dhagaystayaasha ah ee gobolka, iyo kobcinta wanaagga caadiga ah iyada oo loo marayo sheeko ku salaysan jilicsan. Isku-dubarid ka mid ah xirfadleyaasha-farshaxanada, Urur-isweydaarsigu wuxuu u heellan yahay qiimaha farshaxanka wanaagsan, waxbarashada, dheelitirka, bulshada, adkaysiga, iyo kala duwanaanta iyadoo la soo saarayo shaqo tayo sare leh oo ku yaalla Woqooyiga Minnesota.
Isku waafaqsan yoolka McKnight si uu u taageero jawiga ay farshaxanayaashu ku qiimeeyaan hoggaamiyeyaasha bulshadeena, sheekooyinka ku salaysan jilitaanka ayaa leh qalbigooda si ay uga qaybgalaan hal-abuurka dhagaystayaasha iyagoo ah wada-shaqeeye firfircoon oo khibrad u leh wadaagida sheekada - loo shaqeeyaha sida qalabka muhiimka ah ee la xiriirta sheekada sheekada. Sidan oo kale, waxay ku tiirsan tahay farsamooyinka sida isku dheelitir la'aanta, indhoolaha indhaha, muuqaalka (halkii dhabta ah) muuqaalada muuqaalka ah, iyo kordhinta isticmaalka dhawaaqa iyo nalalka abuurista niyadda, gaadiidka asaasiga ah, iyo saameynta guud. Dhageystayaasha waxaa lagu xoojiyey inay xiriir la yeeshaan dareen ahaan iyo maskax ahaanba sheekada, iyaga oo samaynaya waayo-aragnimo tiyaatareed oo wada-jir ah oo isxilqaamiya farshaxanka iyo dhagaystayaasha.
Markii la asaasay sannadkii 1989-kii, masraxa Commonwealth wuxuu hadda ku jiraa xilli-ciyaareedkiisii 23-aad, wuxuuna soo saaray in ka badan 100 ciyaarood. Marka laga soo bilaabo asal ahaan sida barnaamijka qoraalka ah, Urur-isweydaarsigu wuxuu hadda soo saaraa shan wax-soo-saarka guud, shahaadada ardayga ee ardayga, soo-saarka shirkadda tababarka, iyo dhowr dhacdo oo gaar ah inta lagu jiro sanad-dugsiyeedka. Shirkaddu waxay u wareegtay xarun qalab casri ah sannadkii 2007 illaa iyo wakhtigaas ayaa balaarisay balanqaadyadii dhagaystayaasha, waxay heleen sharaf cusub oo ah aqoonsi heer qaran iyo mid caalami ah oo loogu talagalay fiicnaanta farshaxanka, waxaana kordhiyay guud ahaan kaqeybgalka in ka badan 30%. Iyadoo taageero ka heleysa McKnight iyo aasaas kale oo khaas ah, lacagta dadweynaha, iyo deeq-bixiyeyaasha shakhsiyaadka, Shirkadda Isboortiga Caadiga ah waxay sii wadaa inay u adeegto hanti dhaqameed iyo waxbarasho ee gobolka.